Guddiga xalinta khilaafaadka oo fariin deg deg ah kasoo saaray cabashooyinka kasoo baxaya doorashada – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddiga xalinta khilaafaadka oo fariin deg deg ah kasoo saaray cabashooyinka kasoo baxaya doorashada
War-qoraal ah oo uu ku saxiixan yahay guddoomiyaha guddiga xallinta khilaafaadka doorashada dabdan C/risaaq Barre Jaamac ayaa ku sheegay inuusan weli soo bixin go’aan rasmi ah oo ku aadan cabashooyinka kasoo baxaya doorashooyinka dalka.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in guddigu uu weli waddo baaritaano ku aadan dacwooyinkaasi, islamarkaana aysan jirin wax go’aan ah oo kasoo baxay guddiga, balse ay weli socdaan baaritaano ku aadan cabashooyinkaas.
Maalmihii ugu dambeeysay waxaa soo baxaayay cabashooyin ay soo jeedinayaan xubno ka tirsan beelaha ka qeyb-galay doorashooyinka Aqalka hoose ee ka soconaaya magaalooyinka maamul goboleeyadda dalka.
GMXKHDD waxaa u ku wargalinayaa dhamaan inta ay khuseyso dacwadaha aan gacanta ku heyno, in Guddigu uusan weli dacwadahaas go’aan ka gaarin. Muddo dhaw wuxuu Guddiga MXKHDD wuxuu bilaabayaa dhageysiga dacwadaha, dhinac walibana waxaan siineynaa fursad uu isku difaaco.
Arrimaha la xiriira Qoondada Haweenka ee 30% oo ay go’aamisay Madasha Hoggaanka Qaran, Guddiga MXKHDD waxa uu go’aan ka gaarayaa dacwadaha ay soo gudbiyaan Musharrixiinta Dumarka ah oo kaliya.